Mareykanka oo taageeray dhismaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo taageeray dhismaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya
19th November 2014 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Ergeyga Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya James P. McAnulty ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo doorashaddii dhacday November 17, taasi oo madaxweynaha maamulka ku meel-gaarka ee koonfur galbeed loogu doortay Shariif Xasan Sheekh Aadan.
“Dowladda Mareykanka waxay u hambalyeyneysaa dhamaaan qeybaha kala duwan ee ka qeybqaatay wadahadaladdi socdey bilooyinkii la soo dhaafay, kuwaasi oo surtagaliyey in doorasho nidaamsan ay dhacdo. Waxaan kaloo aqoonsanahay doorka ay dowladda Federalka ka qaadatey surtagalinta maamul dhisiddan iyo dib u heeshisinta guud. Waxaana ku boorineynaa dowladda federalka inay sii wadoo surtagalinta hiigsiga 2016 oo ay ka mid tahay maamul u sameynta gobaladda” ayuu yiri James P. McAnulty.
“Dowladda Mareykanka waxay ku boorineysaa madaxda mamulka kumeel-gaarka ee Koonfur galbeed inay tabaha u dhigaan maamul ay u wada dhanyihiin dadka deegaanka, kana bahi tiro dhamaan alaadaha ay u baahanyihin dadka goboladddan dago. Waxaan kaloo ku dhiiragalineynaa maamulka ku meelgaarka koonfur-galbeed inay wada shaqeyn iyo la tashi la sameeyaan dowladda Federaalka si loo suurtagaliyo in mustaqbalka maamul goboleed kamid ah dowladda federaalka uu ka dhasho gobolka,” ayuu yiri Ergeyga Mareykanka ee Somalia, James McAnulty.
Shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo maanta ka furmaya Denmark
Farah Sheikh Abdulkadir: Accomplished and action oriented Minister in Somali Government.